Dalada Somaliland Societies In Europe, Waxay Baaq Cambarayn Iyo Codsi Ah U Diraysaa… | Salaan Media
Dalada Somaliland Societies In Europe, Waxay Baaq Cambarayn Iyo Codsi Ah U Diraysaa…
London:(SM) Sida aan saxaafadda kala soconay waxa magaalada Hargeisa ee casimada jamhuuriyada Somaliland ka dhacay laba arimood oo kala ahaa weerar lagu qaaday 24-kii April ee sanadkan xarunta wargayska Hubaal oo dhaawac loogu gaystay laba suxufi, sido kale waxa la xidhay bishan July 3-deedii ee 2013-ka labada suxufi ee Hassan Hussein Abdillahi iyo Mahamed Ahmed Jamac kuwaas oo xadhigooda lala xidhiidhinayo mihnaddooda shaqo, gaar ahaan warar ay ku qoreen Wargeyska Hubaal.
Dallada SSE waxa ay marka hore cambaaraynaysaa weerarkii waxashnimada ahaa ee loo geystey Wargeyska Hubaal, falkaas oo ay fuliyeen laba xubnood oo midkood ahaa ciidanka nabad-galyada ee Police-ka Somaliland. Waxa kaloo cambaaraynayna xukunka ku dhacay masuuliyiinta wargeyska Hubaal, xukunkaas oo loo adeegsaday xeerka ciqaabta oo ka duwan xeerka madaniga ah ee ay saxaafadi leedahay.
Annaga oo dhanka kalena cambaraynaynaa wargaysyada, suxufinyinta iyo war bahinta kale ee ku kacda warar-ka been aburka ah iyo warar iska horkeenii kara bulshada Somaliland, waxa kaloo u soo jeedinayna suxufiyiinta inay masuuliyadda mihnad ahaaneed iyo midda qaran ahaaneedba ilaaliyaan, kana waantobaan warar kutidhi ku keenta ah ee waxyeelaynaya karaamada mihnadooda oo ku dhisan in ay qoraan warar ka turjumaya xaqiqada kolbaba ay qoroyaan.
Waxa haddana lama huraan ah in ay dimuuqraaddiyadda ku jirto in saxaafadda madaxa bannaan aan la cabudhin. (Taas macnaheeduna maaha in ay qorto war ku xad gudbaya nidamka ay leedahay saxaafadu)
Dallada SSE waxa ay ka codsanaysaa masuuliyiinta xukumadda Somaliland gaar ahaan laamaha garsoorka iyo caddaaladda in muwaaddiniintaas (suxufiyinta) lagu xukumo sharciga waafaqsaan xeerka saxaafada ee hore loo dhaqan galiyay, sidoo kale waxaanu ka codsanayna in la hor keeno maxkamad sida ugu dhakhsaha badan cida loo hayo dembigii lagula kacay suxufiyiinta ee dhawacyada loogu gaystay.
Waxa kale oo SSE ku baaqaysaa in la dhowro xuquuqda muwaaddiniinta dhammaan, gaar ahaan tan suxufiyiinta oo qayb weyn ka ciyaara kobcinta dimuuqraaddiyadda Somaliland.
Dallada SSE waxay soo jeedinaysa in ay xukumadu iyo bahda saxafadu ka gaadhaan heeshis xeerka saxafada madaxa banan ee hore loo dhaqan galiyay si loosoo afjaro muranada xaga sharciga ee soo jitamayay mudada dheer.
Waxa kaloo soo jeedineynaa in iyadoo lala tashanayo saxaafada iyo qaybaha bulshada la soo saaro xeer madani ah oo ashkatooyinka sumcad dillista ama sumcad dhimista loo mari karo oo laga saaro arrimahaas Xeerka Ciqaabta, sida addunka intiisa badanba hadda loogu dhaqmo.
Guddiga Fulinta SSE
Dallada SSE waa dallad ay ku bahoobeen ururadda reer Somaliland ee waddamada Yurub. Waa dallad dhexdhexaad ah oo aan dhinacna raacsanayn.